एउटा बोकाको मूल्य ३ लाख!
१८ बैशाख २०७५
गाउँघरमा एउटा बोकाको मूल्य कति पर्ला? नवलपरासीको एक ब्यवसायिक बाख्रापालन फर्ममा एउटा बोकाको मूल्य ३ लाख छ। नवलपरासीको हर्कपुरमा रहेको बगैंचा फर्म हाउसमा अष्ट्रेलियाबाट ल्याइएको अष्ट्रेलियन बोयर जातका बाख्रा छन्। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
फर्ममा सबै यूरोपमा काम गरेर फर्किएकाहरु खटेका छन् । उनीहरूले पालेको एउटै बोकाको मूल्य यति धेरै रहेको हो। पूर्वप्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यका कान्छा छोरा वीरभद्र आचार्यलगायत १० जनाको लगानीमा सञ्चालित फर्ममा आबद्ध सबै यूरोपमा बसेर कमाएकाहरू छन्। कृषिमा कुनै अनुभव नभएकाहरु आबद्ध भएपनि बाख्रापालन ब्यबसायमा सफल भएका छन्। उनीहरुको बाख्रापालनको सञ्जाल फैलँदो रहेको छ।
‘आठ वर्ष अष्ट्रेलिया बस्दा महिनाको तीन लाख बच्थ्यो,’ सञ्चालकमध्येका सन्तोष धिताल भन्छन्, ‘त्यसले चित्त बुझेन र नेपालमा केही गरौं भन्ने इच्छा जाग्यो।’ कृषि, पर्यटन र हाइड्रोमा लगानी गर्ने सोचाइ बनाएर फर्किँदा कृषिका अनौठा तथ्य बुझ्न पाएको उनले बताए। ‘कृषि मन्त्रालयमा तथ्यांक बुझन जादा भारतबाट नेपालमा वर्षेनी १७ अर्ब बराबरको खसीबोका आयात हुँदो रैछ, त्यसैले हामीलाई तान्यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बाख्रापालन गर्ने निधो गरियो तर, अनुभव थिएन।’ इन्टरनेटमा संसारकै उत्कृष्ट बाख्रापालन खोज्दै जादा अष्ट्रेलिया भेटियो। २०७२ सालमा त्यहाँबाट १२ पाठी र ७ वटा बोका ल्याएको उनले बताए।
वीरभद्र आचार्य अमेरिका बसेका, अशोक शर्मा पौडेल ६ वर्ष डेनमार्क बसेका र धिताल अष्ट्रेलिया बसेपनि बाख्रापालनको योजना बनाउञ्जेल पशु र कृषि सम्बन्धि कुनै अनुभव थिएन। ‘एउटै बोकाको २ लाख ६० हजार मूल्य तिर्‍यौं,’ धिताल भन्छन्, ‘अहिले वार्षिक ४० लाख आम्दानी छ।’ उनीहरुको फर्महाउसमा यतिबेला १ सय ६० वटा बाख्रा छन्। ४ बिघामा उन्नत जातको घाँसखेती छ।..
झारपात जम्मा भएर कम्युनिस्ट बन्न सक्दैनन्ः चित्रबहादुर केसी
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह रौतहटमा, दूर्गा मन्दिरमा पूजा
कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरण कांग्रेसलाई अवसर हो : देउवा
गृहजिल्ला चितवन आइपुगे सन्दीप, विमानस्थलमै फ्यानको भिड
करण जोहरको जन्मदिनमा भावुक हुँदै बलिउड सुपरस्टारले दिए शुभकामना
नियमित विद्युत् आपूर्तिले मूल्यवृद्धि अनुमानित सीमाभन्दा तल
सभापति देउवाविरुद्ध नेविसंघको नाराबाजी
'महारानी' शब्द रेकर्डबाट हटाउन सुवास नेम्वाङको मागः ‘मैलै पनि रेल चढेको सपना देख्न थालेको छु’
अन्तःशुल्क बढ्ने सूचना चुहिएपछि गाडी आयात बढ्यो, १० दिनमै ८२६ गाडी आयात
सावधान ! ACCA कोर्ष के हो ? यसरी ठगिन सक्नुहुन्छ
एमाले-माओवादी पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रम
मलेसिया रोजगारीमा लुटधन्दा : सिन्डिकेटधारीमाथि श्रममन्त्रीको धावा
छाती दुख्छ भने मुटुरोग वा ग्याष्ट्रिक! कसरी छुट्याउने?
यस्तो छ तस्करीको ३३ किलो सुनको लगानीकर्ता बस्ने घर
कस्तो रह्यो मोदीको भ्रमण !
एमाले र माओवादी विघटनको तयारी : प्रचण्ड
अब डिजिटल प्रणालीबाटै सरकारले राजश्व बुझ्ने
प्रधानमन्त्रीले गरे बुद्धिजीवीलाई ‘मुसा’सँग तुलना
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवस : एमाले–माओवादीको संयुक्त कार्यक्रम
► Play 3066
► Play 1504
► Play 900
► Play 761
► Play 503